Ukugqoka okuphezulu | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukugqoka okuphezulu
Indlela futhi kungani ukusebenzisa "i-Ridomil Gold"
Lesi sihloko sincoma ukuthi sijwayelane nesidakamizwa esithi "Ridomil Gold", imiyalo yokusetshenziswa kwayo, izinyathelo zokuqapha, izinzuzo kanye namathuba okuzihlanganisa nezinye izidakamizwa. Incazelo "Ridomil Gold" "Ridomil Gold" iyi-fungicide yemfanelo yokuvimbela nokwelashwa kwezitshalo. Isetshenziselwa ukulwa nokulimala okuphelile, Alternaria nezinye izifo ze-fungal.
I-honeysuckle yokuhlobisa: ukutshala nokunakekelwa
Incazelo ephelele yezici zalesi sitshalo ihlanganisa ukuphikisana okuningi. Kulo mndeni kukhona kokubili izihlahla eziphakeme neziphansi. Uhlobo lwe-Wood kanye ne-lianovidny. With izithelo ezihlwabusayo noma izinqubo zokuhlobisa. Izinhlobo ezingaphezu kuka-200 zalesi sitshalo ziyaziwa. I-honeysuckle ehlobisa: izinhlobo nezinhlobonhlobo I-honeysuckle yokuhlobisa ivame ukufaka izinhlobo zezinhlobo ezinezimo ezinamahlathi.
Rhubarb, imithetho yokukhula nokuvuna
I-Rhubarb iyimifino ehlala isikhathi eside emndenini we-buckwheat, eneqabunga elinamandla elinama-rhizome namaqabunga amakhulu, elitholakala kuma-petioles aminyene nesikhathi eside. I-Petioles ikhula kuze kube ngu-80 cm ubude futhi ibe ngu-4 cm ubukhulu, isisindo sayo singafinyelela ku-1 kg. Kulesi sihloko sizokhuluma ngemithetho yokukhula nokuvuna i-rhubarb.
Kungenzeka yini ukuba ukhule i-lavender ekhaya, nokuthi ungayenza kanjani
I-Lavender (lat. Lavandula) - ummeleli wezinhlobo zezitshalo zomndeni yasnotkovyh (uLamiaceae noma uLabiatae). Igama livela kulesiGreki. "Lava", okusho ukuthi "ukugeza", ngenxa yokuthi eGrisi lasendulo, i-lavender yanezelwa emabhati okugeza. I-Botanists ihlanganisa izinhlobo ezingu-47 zalesi sitshalo. I-Lavender ivela eMedithera.
Izici zeClematis Care: Konke Okuphathelene Nokudla Nokufakelwa Kwama Flower
I-Clematis, i-clematis, imivini - ngokushesha nje lapho bengabizi le mbali ejabulisayo. Ungamhlangabeza, cishe, kuzo zonke izingxenye zomhlaba. Okwamanje, ososayensi baye bathola izinhlobo ezingaphezu kuka-300 zalesi sitshalo - kusukela embukisweni wokuhlobisa, emabhokheni ukukhuphuka ama-subspecies, asetshenziselwa ukuhlobisa izindonga, i-gazebos nezinye izinto.
Yini ehlanzayo: ukwakheka, izinhlobo, uhlelo lokusebenza
Izitshalo, ezifana ne-potassium ne-sodium humate, sekuyisikhathi eside sezigqoka. Kulula ukuyisebenzisa, kodwa ngesikhathi esifanayo ngempumelelo kakhulu. Uthobisa - ukuthi yikuphi Ake sicabangele ukuhlanza kahle futhi sikucacise ukuthi kuyini. Ukuthobeka yiqembu elikhulu lezidakamizwa, zenziwa ngamanoni ama-acids e-humic, okungazitholi kalula.
Umanyolo wokutshala: ukutshala okuhlaza okuhlaza
Namuhla, amashalofu ezitolo zezolimo zigcwele ukudla okuhlukahlukene kwezitshalo. Kodwa enye yemigomo esemqoka yabalimi yizinzuzo kanye nemvelo yezitshalo ezikhulile. Ububanzi obunikezwa izitolo akusiyo ngaso sonke isikhathi ewusizo kulokhu. Kukhona amahle kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu angabizi, okunye - umanyolo onenambuzane wezitshalo.
Izindlela zokukhiqiza i-pelargonium. Indlela yokunakekela imbali emva kokutshala?
UTomato Katya F1: Ukuchazwa okuhlukahlukene kwasekuqaleni, izimo ezikhulayo
Izinhlobo ze-pepper ezidumile "Bogatyr": incazelo eningiliziwe, imithetho yokulima kanye nesithombe
Uhlobo oluhlobisa ngomlando ocebile - Izinkukhu Goudan
Imithetho eyisisekelo yokunakekela i-sundew
I-Fragrant Dracaena - ukutshala nokunakekela ikhaya
Ama-aphid ezitshalweni zasendlini - ukuthi ungaphatha kanjani ekhaya
Indlela yokutshala nokukhula izimbali Veronica ensimini